I-SACP ithi inhloso yokushintshwa kweKhabhinethi bekuwukuxosha uBlade Nzimande – LIVE Express
I-South African Communist Party isigxeke uMengameli Jacob Zuma ngokushintsha iKhabhinethi lakhe ngoLwesibili ekuseni, yathi inhloso yakho konke lokhu bekuwukuxosha lowo obenguNgqongqoshe we-Higher Education and Training uDr Blade Nzimande.
“Umbono wethu ukuthi lokhu akusikhona ukuhlela kabusha kodwa ukukhishwa okuqondiswe ku-Cde Blade njengokuhlaselwa okuqondiswe ngqo kwi-SACP,” kusho iSACP ngoLwesibili esitatimendeni.
La madlelandawonye e-ANC athi ngokujwayelekile inhloso yokuguqula iKhabhinethi ukuqinisa ukusebenza kombuso, athi kodwa kulokhu kuyabonakala nje ukuthi inhloso akusiyona leyo, ikakhulukazi njengoba ithi kugcinwe inqwaba yongqonqoshe ethi abekho esimweni esihle nabangasadingeki.
FUNDA NALOLU DABA: Nalu uhlu loNgqongqoshe abaqokelwe ezikhundleni ezintsha
I-SACP ithi uZuma uxoshe uNzimande ngoba ebuyisa izinduku kulandela ikhwelo elihlatshwa yi-SACP kanye neCosatu, nayo ekumfelandawonye ongunxantathu ne-ANC, lokuthi uZuma kumele asule ngokushesha esikhundleni. UNzimande uphinde abe nguNobhala Jikelele we-SACP.
Le nhlangano yona ithi isizathu esenza ukuthi ifune ukuthi uZuma ehle esikhundleni kungenxa yonkohlakalo ethi idla lubi ngaphansi kobuholi bakhe kanye nokulawulwa kombuso (state capture).
I-SACP ithi uma ngabe uMengameli Zuma ebecabanga ukuthi isizovaleka umlomo ngoba esexoshe uNzimande, ushaye phansi kwashunqa uthuli ngoba okunalokho isizoqhubeka kakhulu ngokugxeka inkohlakalo kanye nokulawulwa kombuso.
Abesilisa yibo abamoshayo ngama-credit card okunabesifazane